Su'aalaha La Weydiiyo - Shang Hai Tongke Flow Technology Co., Ltd.
1. Waa maxay dekedda shixnad？
Marka loo eego gudbinta codsiga macaamilka ee dekedda loogu talagalay, haddii aysan jirin codsi gaar ah, dekedda rarku waa dekedda Shanghai.
2. Waa maxay muddada bixinta？
30% udiyaar garowga T / T, 70% T / T kahor rarka, ama amaahda L / C ee aragga.
3. Waa maxay taariikhda dhalmada?
30- 60 maalmood ka soo qaad warshada kadib helitaanka deebaajiga iyadoo loo eegayo noocyada kala duwan ee bambooyin iyo siyaado.
4. Muddo intee le'eg ayaa ah muddada damaanadda?
18 bilood kadib marka sheyga laga keenayo warshada ama 12 bilood kadib bilaabida isticmaalka qalabka.
5. In la bixiyo dayactirka iibka kadib?
Waxaan haynaa injineero aqoonyahanno ah oo bixiya hagista rakibida iyo adeegyada dayactirka kadib.
6. In la bixiyo tijaabada wax soo saarka iyo in kale.
Waxaan ku siin karnaa noocyo kala duwan oo tijaabooyin ah iyo tijaabooyin dhinac saddexaad ah iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
7. Badeecada mala habeyn karaa?
Waxaan u habeyn karnaa alaabada iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
8. Shaybaar ma bixisaa?
Maaddaama badeecadeenu yihiin alaabooyin farsamo ahaan loo habeeyay, guud ahaan ma bixinno shaybaarro.
9. Waa maxay heerarka bambooyinnada dabka?
Mishiinnada dabka si waafaqsan heerarka NFPA20.
10. Heerkee ayuu mishiinkaaga kiimikada uu buuxiyaa?
Sida ku cad ANSI / API610.
11. Ma waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi?
Waxaan nahay soo saare, waxaan leenahay warshad noo gaar ah, oo ka gudubtay nidaamka ISO ee shahaadada haysta.
12. Maxaa la xareeyay alaabooyinkaaga loo isticmaali karaa?
Waxaan ku soo bandhigi karnaa noocyo kala duwan oo badeecooyin ah oo lagu dalbado wareejinta biyaha, kuleylka iyo nidaamka qaboojinta, habka warshadaha, warshadaha kiimikada batroolka, nidaamka dhismaha, daaweynta biyaha badda, adeegga beeraha, nidaamka la dagaalanka dabka, daaweynta bulaacada.
13. Waa maxay macluumaadka aasaasiga ah ee la siinayo si baaritaan guud loo sameeyo?
Awood, Madaxa, Macluumaad Dhexdhexaad ah, Shuruudaha Waxyaabaha, Gawaarida ama Naaftada la wado, Mowjadda baaxadda leh. Haddii bamka marawaxadaha toosan, waxaan u baahan nahay inaan ogaano dhererka salka hoostiisa iyo dheecaanku wuxuu ku yaal salka ama ka salka salka, haddii uu bamka iskiis u soo saarayo, waxaan u baahan nahay inaan ogaanno nuugista Madaxa ect.
14. Miyaad kugula talin kartaa mid ka mid ah alaabtaada ku haboon inaan isticmaalno?
Waxaan haynaa shaqaale xirfadlayaal farsamo ah, sida ku xusan macluumaadka aad bixiso, oo ay weheliso xaaladda dhabta ah, si aad ugula talisid kan ugu habboon alaabadaada.
15. Waa maxay noocyada bambooyin aad leedahay?
16. Dokumenti noocee ah ayaad ku bixin kartaa qiimaha?
Waxaan guud ahaan bixinnaa liistada oraahda, qalooca iyo xaashida xogta, sawir qaadista, iyo dukumiintiyada kale ee dukumiintiyada lagu baaro ee aad u baahan tahay. Haddii aad u baahan tahay soddonka qaybood ee tijaabada markhaatiga way hagaagi doonaan, laakiin waa inaad bixisaa soddonka khidmadda ah.